March 2018 - Page5of9- My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Sexual Interest of Male Vs Female
အမျိုးသမီးနဲ့ အမျိုးသား၊ တူတူနေချင်စိတ်ဘယ်သူကပိုများ? ဒီခေါင်းစဉ်လေးကြည့်လိုက်ရင် အားလုံးကပြိုင်တူဖြေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ယောကျ်ားလေးတွေက ပိုပြီးတူတူနေချင်စိတ်များတာပေါ့ ဆိုတဲ့အဖြေကို တစ်ရာမှာ ကိုးဆယ့်ကိုးယောက်ဖြေကြမှာပါ။ ကဲ ဒီတော့ အဲဒီအဖြေမှန်မမှန်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော်။ “ယောကျာ်းလေးတွေက အဲဗားရယ်ဒီ တဲ့” ယောကျာ်းလေးတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး လိင်စိတ်ထကြွနိုင်မှုပိုများတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ တွေ့ရမြင်ရတဲ့အခါကြင်နာပစ်လိုက်ချင်တဲ့စိတ်၊…
မိခင်လောင်းများသိစေဖို့ ဉာဏ်ရေမမှီတဲ့ ကလေးမမွေးဖို့၊ ဦးခေါင်းခွံမပါတဲ့ကလေးတွေမမွေးဖို့ဆိုတာ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုရင် ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်ထဲက ပြင်ဆင်သင့်တာတွေ ပြင်ဆင်ဖို့က အဓိကပါပဲ။ ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲ ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ခန္တာကျန်းမာအောင်ပြင်ဆင်ပါ။ အမျှင်ဓာတ်ပါတဲ့ အသီးအနှံများများစားပေးခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပုံမှန်လုပ်ပေးခြင်းဟာ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပါတယ်။ မြေဩဇာကောင်းတဲ့မြေမှာ ကောင်းတဲ့သီးနှံသီးသလိုဘဲ ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့မိခင်ထံမှာ ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့…
ဝမ်းပိတ်ဆေးအကြောင်း ဘယ်လောက်သိထားပြီလဲ? ဝမ်းလျှောတိုင်း ဝမ်းပျက်တိုင်း ဝမ်းပိတ်ဆေး အလွယ်မသောက်သင့်ပါဘူး ဝမ်းပျက်တာသေချာဖို့လိုပါတယ်။ တစ်နေ့လျှင် ဝမ်း၃ ကြိမ်နှင့်အထက်သွားတာဖြစ်ရပါမယ်။ ဝမ်းကလုံးဝအရည်နီးပါးဖြစ်နေရပါမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ဝမ်းပျက်တာသေချာပါတယ်။ ဝမ်းပျက်တဲ့ရက်ကလည်း ရက်တိုဖြစ်ရပါမယ်။ ၂ပတ်မကျော်ရပါဘူး။ ၂ပတ်ထက်ကျော်မယ်ဆိုရင် နာတာရှည် ဝမ်းပျက်တာဖြစ်လို့ ဝမ်းပိတ်ဆေးမသောက်သင့်ပါဘူး။ ဖြစ်စေတဲ့ရောဂါ အကြောင်းအရင်းရှာပြီးကုသရပါမယ်။ ဝမ်းပိတ်ဆေးမသောက်မှီ…
ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး က …. သင့်အတွက် ဘယ်လောက်ထိ အရေးကြီးသလဲ တစ်နေန့ှစ်ကြိမ် သွားတိုက်ရမယ်…. အစာစားပြီးတိုင်း အာလုတ်ကျင်းရမယ်…. စတဲ့ အခြေခံအချက်တွေဟာ… အားလုံးသိပြီးသားတွေပါ…. ဒါပေမယ့် တခါတရံ မေ့လျော့ပေါ့ဆပြီး… သွားမတိုက်ဘဲ အိပ်ရာဝင်သွားဖြစ်တာမျိုးတွေလဲ ရှိတတ်ကြပါတယ်… အဲဒီအခါ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲဆိုတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ…
လိင်ကတဆင့် သင့်ဆီကူးစက်မယ့် ရောဂါ တွေ လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွက်ပါ ကောင်းကျိုးတွေရှိပေမယ့်…. တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ ရောဂါပိုးပေါင်းများစွာကို သင့်ဆီ သယ်လာပေးမယ့် အန္တရာယ်ကလဲ ရှိနေပါသေးတယ်….. အဲဒီရောဂါပိုးတွေကတော့….. ကာလသားရောဂါ…ဆီးပူညောင်းကျရောဂါ… အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး… စီပိုး… ရေယုန်ရောဂါပိုး……
လူ့လောကထဲလာခွင့်မရလိုက်တဲ့ကလေလေး ကျွန်မ သေဆုံးခြင်းတရားက်ု ကြုံဖူးပါတယ်။ နီးစပ်ရာ ဆွေးမျိုး၊ ချစ်ခင်သူတွေ သေဆုံးတာကို မြင်ဘူးကြုံဖူးနေကြ။ ဒါပေမယ့် ဒီတခါ ဘာနဲ့မှမတူ ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး ဆွဲထုတ်ခံရ ခံစားချက်မျိုး။ ကိုယ့်ဝမ်းနဲ့ ၈လကျော်လွယ်ထားတဲ့ကလေး ရုတ်တရက်မမွေးသေးခင် သေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်။ ကလေးမလှုပ်ဘူးထင်လို့ ဆေးရုံသွားပြတော့ ”…
ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံးများ ဒီနိုင်ငံမှာ အရမ်းလူသိမများသေးပေမယ့် အခြားနိုင်ငံတွေမှာ အတော်အသုံးများလာကြတဲ့ကုထုံးဖြစ်ပါတယ်။ ခန္တာကိုယ်မှာအသက်ကြီးလာတာနွဲအမျှ လိုအပ်တဲ့ဟော်မုန်းပမာဏတွေ နည်းလာတတ်ပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာ အသိသာ ဆုံးကတော့ အမျိုးသမီး အီစတိုဂျင် (oestrogen hormone) နည်းပါးလာပြီး သွေးဆုံးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟော်မုန်းအစားထိုးတယ်ဆိုတာဟာ နည်းသွားတဲ့ ဓာတ်ကို ပြန်လည်ဖြည့်ပေးတာ…
ကျားကျားလျားလျားဖြစ်စေတဲ့ အမျိုးသားဟော်မုန်း အမျိုးသားဟော်မုန်းလို့ လူသိများကြတဲ့ Testosterone အကြောင်းလေး ပြောပြချင်ပါတယ်။ Testosterone ဟာ ယောကျာ်းဆန်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ ကြွက်သားထုကြီးထွားခြင်း ဖြစ်အောင် အဓိကလုပ်ပေးတဲ့ဟော်မုန်းပါ။ ဒါ့အပြင် လိင်စိတ်နှိုးကြားမှု၊ အရိုးကြီးထွားမှု၊ သွေးနီဥ ဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်မှုတို့မှာလည်း ပါဝင်အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ အမျိုးသားတွေအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ဒီဟော်မုန်း ပမာဏကျလာတတ်ပါတယ်။…
ဗိုက်ထဲက ကလေးလေး လှုပ်နေတာ ခံစားရပြီလား? ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေအတွက် ကလေးလှုပ်တယ်ဆိုတာ အိပ်မက်ဆန်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအနေနဲ့ ကလေးလှုပ်ခြင်းကို အစောဆုံးအနေနဲ့ နောက်ဆုံးရာသီလာရက်မှ စရေတွက်ရင် ၁၃ပတ်_ ၁၆ပတ်( ကိုယ်ဝန် ၄လမြောက်) လောက်မှာ စတင်ခံစားသိရှိနိုင်ကြပါတယ်။ ကလေးလှုပ်တာဟာ မိခင်နဲ့…